Soszi, Qoraa SmartMe ah
Posts by Soshi
Dom » Maqaallada Waxaa daabacay Soszi
Ilaa hadda qofka ugu waalan ee waalan ee loo yaqaan 'SmartMe'. Waa uu fahmaa, jecel yahay wuuna awoodaa inuu si buuxda ugu dhex socdo warbaahinta bulshada. Wuxuu ka takhalusaa Instagram iyo Pinterest. Way ku mahadsan tahay inaad arki karto sida tikniyoolajiyadda qurxoon ay u ahaan karto iyo waxa shaqadeena jikada u egtahay. La'aanteed, SmartMe ma noqon lahayd mid midab leh. Oo isaguna wuxuu u sameeyaa qoraal hoosaadyo fiidiyowyadayada YouTube-ka wuxuuna qoraa warar. Kooxda dhedig!
Xayeysiinta toddobaadlaha ah 12.04 / 18.04-XNUMX / XNUMX
nololeedka, dib u eegista, unboxing
FEIYUTECH Vlog Pocket 2 - dib u eegista gimbal
android, FEIYUTECH, FEIYUTECH Vlog Pocket 2, gimbal, macruufka, iphone, smartphone
Wax badan kama aqaano sawir qaadista, laakiin tan iyo markii aan bilaabay qorista dib u eegista iyo duubista xoogaa, waxaan ogaaday inaan u baahanahay wax iga caawin kara inaan taleefanka ku haysto meel caadi ah isla markaana aan yareeyo saamaynta gacan qaadashada in yar. Waxaan raadinayay ...